March 2019 - Page 2 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
March 24, 2019 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa lasoo doortay maanta oo Axad ah. Xubnaha golaha cusub ee Gaalkacyo ayaa ka kooban 31, kuwaasoo kasoo jeeda qabiilooyinka degan magaalada. Xubnaha cusub ayaa la dhaarshay isla maanta […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Xuseen Cali Maxamed u magacaabay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Bari, sida lagu sheegay digreeto xafiiska madaxweynaha ka soo baxday Sabtidii. Xuseen ayaa badali doona Cabdixakiin Xuseen […]
March 23, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay kadib markii dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen wasaaradda arrimaha gudaha ee Muqdisho maanta oo Sabti ah, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters, oo […]
March 22, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso maanta oo Jimce ah. Gaari noociisu ahaa Toyota Propox oo siday arday dhigta dugsi sare oo kuyaala magaalada […]
March 21, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Asbuucyadii u dambeeyay waxaa sii kordhaysay xiisad colaadeed oo ka jirta gobolka Sanaag oo u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland. Xiisada ayaa soo ifbaxday kadib markii horaantii bishaan ay deegaano gobolkaas kuyaala yimaadeen ciidamo […]
March 20, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada Amnesty International ayaa sheegtay in duqeymaha Mareykanka lagu dilay dad rayid ah, taasoo macquul ah in ay jirto xadgudub dhanka sharciga aadanaha ah. Warbixin ay ciwaan uga dhigtay “dagaalka qarsoon Mareykanka ee […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Axmed Maxamuud Maxamed oo si weyn loogu yaqaanay Garaad, kaasoo kamid ah raga ugu waa-weyn ee burcadbadeeda Soomaaliya ayaa lagu dilay gobolka Mudug Isniintii, sida ay sheegeen eheladiisa iyo ciidamada booliiska. Garaad ayaa […]
Galkayo-(Puntland Mirror) Ahmed Mohamoud Mohamed, popularly known as Garaad, who was one of the Somali pirate kingpin was killed in Mudug region on Monday, his relatives and police said. Garaad was ambushed and killed by […]
March 19, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afar dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gudaha Soomaaliya. Duqeynta ayaa Isniintii ka dhacday deegaanka Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) […]
March 18, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada Laanqeyrta Cas ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan ICRC ayaa ka shaqeynaysa sidii ay u fududeyn lahayd is-dhaafsiga maxaabiista ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Axadii, saraakiil […]